Bolivia Akapana pyramid makeover is a renovation fiasco |
Location: musha » Kutumira » Newsletter » Bolivia Akapana piramidhi makeover ndeyekugadziridza fiasco
Bolivia Akapana piramidhi makeover ndeyekugadziridza fiasco
TIWANAKU, Bolivia - Ichida kukwezva vashanyi vazhinji, guta reTiwanaku muBolivian Andes rakasimudza piramidhi rekare reAkapana neadobe panzvimbo yedombo, mune izvo vamwe varikudaidza
TIWANAKU, Bolivia - Ichida kukwezva vashanyi vazhinji, guta reTiwanaku muBolivian Andes rakasimudza piramidhi rekare reAkapana neadobe panzvimbo yedombo, mune izvo dzimwe nyanzvi dziri kudaidza kuti kugadzirisa patsva.
Zvino, iyo piramidhi yeAkapana ine njodzi yekurasikirwa nemazita ayo seUN World Heritage Saiti, uye pane kunetsekana kuti makeover ingatokonzere kupunzika kwayo.
Iyo piramidhi ndechimwe chezvivakwa zvikuru pre-Columbian muSouth America uye chivakwa chakakosha pakunamata kweTiwanaku budiriro, iyo yakapararira kumaodzanyemba kwakadziva kumadokero kweBolivia uye zvikamu zvepakati pePeru, Argentina neChile kubva munana 1500 BC kusvika AD 1200.
Jose Luis Paz, uyo akagadzwa muna Chikumi kuti aongorore kukuvara panzvimbo iyi, inoti nyika National Archaeology Union, UNAR, yakakanganisa kusarudza kuvaka zvakare piramidhi ichishandisa adobe, pazvinenge zviri pachena kune ziso rakashama kuti yekutanga yaive yakavakwa nematombo .
"Vakafunga kuenda vakasununguka nemaoko (matsva)… Hapana zvidzidzo zvinoratidza kuti madziro akanyatsoita seizvi," Paz akaudza Reuters paakamira pamberi pepiramidhi munzvimbo yeTiwanaku yekuchera matongo, mamaira makumi mana kuchamhembe kweBolivia guta rekutungamira reLa Paz.
Sekureva kwaPaz, uyo ave kutungamira kuchera panzvimbo iyi, guta reTiwanaku rakapa basa UNAR kuti ivandudze Akapana kuti ive "inokwezva vashanyi," zvisinei nekuti piramidhi raimbove rakaita sei pakutanga.
Zviuru zvevashanyi zvinoshanyira Tiwanaku gore rega rega uye vanobhadhara madhora gumi kuti vapinde munzvimbo iyi, asi musha weTiwanaku, uyo unotarisira paki iyi, waifunga kuti piramidhi rinotaridzika zviri nani raizokwezva vashanyi vazhinji, akadaro.
Gurukota rezvetsika, VaPablo Groux, vakasiya zvimwe zvekushoropodza vakati kuvandudzwa kwakagara kuchidaidzwa.
“UNAR yakadzorera chimiro chepakutanga icho piramidhi chaive nacho. Kana tikatarisa mifananidzo kubva makore mashanu apfuura, kwaingova nechikomo ipapo. Chatiri kuona izvozvi chimwe chinhu chiri padhuze neyaivakwa pakutanga, ”akadaro.
Zvakadaro, Paz akati gakava harisi rezve ma aesthetics chete.
Iyo archeologist yakati madheki epasi akadzikiswa zvishoma nekuda kwekuwedzera huremu hwemadziro eadobe, izvo zvinogona kutungamira mukudonha kwepiramidhi.
Sangano reUnited Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation, kana UNESCO, inofanirwa kushanyira Tiwanaku munguva pfupi uye kana ikafunga kuti Akapana yakadzvanywa zvakanyanya, inogona kudonhedza Tiwanaku kubva pane yayo runyorwa rweWorld Heritage Sites.
Muna 2000, UNESCO yakafunga kuti Tiwanaku yaifanirwa kuverengerwa nekuti matongo ayo "anopa humbowo hunoshamisa kune simba rehumambo iro raitungamira mukusimudzira budiriro yeAndean pre-Hispanic."
Kubudirira kwaTiwanaku, uko kwakakomberedza dziva reTiticaca, kwaive kumwe kwekutanga kweumambo hweInca, hupfumi hukuru hwepamberi peColumbian muAmerica.
Groux anotenda kuti Tiwanaku haizorasikirwa nehunhu hwayo hweWorld Heritage nekuti hurumende yakamisa chirongwa chekuvakazve kutanga kwegore rino, vachangoudzwa neUNESCO.
“Kuiswa mune runyorwa rweWorld Heritage Sites kunosanganisira kuongorora nguva dzose, nekuti dzimwe nzvimbo dzinogona kurasikirwa nehunhu hwekuti nei vakaverengerwa. Panyaya yekuti Tiwanaku arasikirwe nechinzvimbo ichi hazviite, ”akadaro.
Kubiwa kwematombo akavezwa aAkapana uye maceramics zvakatanga munguva pfupi mushure mekukunda kweSpanish uye chimiro chakazoshandiswa senzvimbo yekuchera, kubva mabwe aibviswa kuvaka njanji uye chechi yeKaturike padyo.
Ukuru hwayo uye iyo-yakamira-yakadzika matafura ekunze anoratidza kuti Akapana yaimbova chivakwa chinoshamisa, asi nekuda kwekutora nechando uye kwakanyanya tembiricha nemhepo ine simba mubani reAndes, makiromita mazana maviri nemashanu pamusoro pegungwa, piramidhi rinotaridzika kunge rakadzikira.
Argentina Borivhiya Chile Reuters UNESCO United Nations
Miroslav Dvorak akagadza CEO mutsva weCzech Airlines
Arik Air inogadza director maneja mutsva
Vakadzi Vazhinji Vasina Kudya - Vanongo ...
Finnair Wet Leases an A320 kubva DAT nokuda Busy...
Mhedzisiro yeCannabinoids paOpioid Kushandisa uye PTSD
Bamboo Straws Market 2022: Kuwedzera Kudiwa kwe...
UK inowedzera yakavanzika jets kune yayo yekuRussia kurambidzwa kubhururuka
Shift yeCOVID kubva kuPandemic kuenda kuEndemic
Chikwata cheEthiopian Airlines chinodoma mukuru mutsva...
Kunyoreswa Kwekudya Kutsva kwakarongedzerwa kubhenefiti yekurapa